I-Sundowns ishaye iStellenbosch | Scrolla Izindaba
I-Sundowns ishaye iStellenbosch
IMAMELODI Sundowns ikhombisile ukuthi kungani iyiqembu elihamba phambili kwiligi ephezulu yaseNingizimu Afrika ngesikhathi ishaya iStellenbosch ngamathathu eqandeni, emdlalweni we-DStv Premiership ukuze ibuyele phezulu endaweni yayo ebithathwe iSwallows FC.
Lokhu kunqoba kubasuse emaphuzwini ayi-13 emidlalweni emihlanu, bahamba phambili ngamaphuzu amabili belandelwa iSwallows esendaweni yesibili. UPeter Shalulile noKermit Erasumus babeke iDowns phambili ngaphambi kwesigamu, bakhombisa ukuthi kungani iDowns isebenzise imali eningi ukubathenga kwiHighlands Park nakwiCape Town City ngokulandelana.
Lona bekungumdlalo wokuqala weSundowns ngemuva kokudlula emhlabeni komdlali wayo wasemuva uAnele Ngcongca. Kube nemizwa ngesikhathi abadlali behlonipha uNgcongca ngokukhombisa ijezi elinegama nobuso bukaNgcongca.
Umdlali webhola lezinyawo ovelele ku-PSL njengamanje uThemba Zwane, ushaye igoli lokugcina esigabeni sesibili ethatha iDowns eyibeka kumagoli ayisikhombisa asebewashaye emidlalweni emibili edlule. Kulokhu ompetha bakwazile ukuyigcina iqinile emuva futhi badlale kahle kakhulu – okuyinto abahlulekile ukuyenza ngesikhathi beshaya AmaZulu ngo 4-3 ngempelasonto edlule.
Uma kwenzeka iSundowns iqhubeka naleli fomu ingabhala kahle igama layo emabhukwini omlando webhola laseNingizimu Afrika ngokuba yiqembu lokuqala ukunqoba iligi amahlandla amane elandelana.
Kodwa amaqembu afana neStellenbosch asethubeni lokulungisa amaphutha ayo okuzivikela abalahlekisele ngomdlalo wanamuhlanje. Umqeqeshi wabo uSteve Barker, umshana walowo owake waba ngumqeqeshi weBafana Bafana wanqoba kwi-Afcon ngowezi-1996 uClive Barker, usenesikhathi sokuqinisekisa ukuthi abafana bakhe babe yithimba elizobhekwa kule sizini.
Eminye imiphumela: Orlando Pirates 1-1 Baroka FC, TS Galaxy 1-1 Golden Arrows.